ဘုရားရှစ်သောင်း၊ လေးထောင်ဆောင်း၍၊ ကိန်းအောင်းစံရန်၊ စမ္မခဏ်သည်၊ သန်တောင်ဖြိုးမြင့် စွင့်စွင့်လေ။ ။
အကိုက်လေးဖော်၊ မြေမှပေါ်သည်၊ သျှင်ကျော်လေးဦး ခူးလိမ့်လေ။ ။
ခူးလည်း ခူးလတ္တံ့။ ကူးလည်း ကူးလတ္တံ့။ စူးလည်း စူးလတ္တံ့။ မြူးလည်း မြူးလတ္တံ့။ ။
ထိုတဘောင်သီချင်းသည် မြို့တွင်းမြို့ပြင် ထက်ဝန်းကျင်တို့၌ သီဆိုသူပေါ၍ အကျော်တစောဖြစ်နေလေသည်။ ထိုအခါ သက်ကြီးရွယ်ရင့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် တောင်တွင်းကြီးမြို့မြောက် ငှက်ပစ်တောင်၏အရှေ့၊ ထူပါရုံအရာမ်၏အနီး သီဟပတေ့ကြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသော ရတနာဗိမာန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးသော ငှက်ပစ်တောင်ဆရာတော်ဟု၎င်း ထူပါရုံဆရာတော်ဟု၎င်း ထင်ရှားသော ဆရာတော် သျှင်သီလာစာရာဘိဓဇထံသို့ သွားရောက်၍ လျှောက်ထားကြလေသည်။
ထိုအခါ ဆရာတော်ဘုရားက ပေဟူသည်ကား စာဖြစ်သည်၊ ပေပင်မည်သောကြောင့် စာပေကျမ်းဂန်တွင် အထူးသိမြင်နှံ့စက်သော ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ယူရမည်၊ ယခုမူ ပေတစ်ပင် လည်း မဟုတ်၊ ပေလေးပင် ဖြစ်သောကြောင့် ပိဋကတ်တော်၌ ခြောက်ချားနိုင်သော သျှင်ကျော်လေးပါးတို့ ပေါ်လိမ့်မည်၊ ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါမှစ၍ တောင်တွင်းကြီး တစ်မြို့လုံး၌ ပေလေးပင် သျှင်လေးပါး ပေါ်လိမ့်မည်ဟူသော စကားသည် အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် ဖြစ်နေလေသည်။
သက္ကရာဇ် ၈၅၉-ခုနှစ်တွင် ဆရာတော်သျှင်ဥတ္တမသည် ရတနာပူရ အင်းဝနေပြည်တော်သို့ ကြွရောက်တော်မူခဲ့၏။ အင်းဝမြို့သို့ ရောက်ရှိသည်တွင် မိတ်ဆွေဖြစ်သူ သျှင်သီလဝံသအား ရုတ်တရက် ရှာဖွေမရသဖြင့် ဓမ္မာရုံတစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်တည်းခိုရလေသည်။ ထိုအခိုက် စကားတတ်သဖြင့် လွှတ်ရုံးငါးရပ်ကပင် ပယ်ထားခြင်း ခံရသော ခုံတော်မောင်ကျဘမ်းနှင့် တွေ့ရလေသည်။ မောင်ကျဘမ်းသည် ဆရာတော်၏ အသွင်အပြင်ကို ကြည့်၍ တောထွက်ရဟန်းကြီးဟု မှတ်ထင်သဖြင့် ဦးချဝတ်တွားခြင်း မပြုဘဲ ဆရာတော့်ရှေ့တွင် တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်၍ မလေးစားသော အမူအရာဖြင့် ဦးပဉ္စင်းကြီး ၊ ဘယ်အရပ်က ကြွလာသနည်း၊ ဟု မေးသည်။ ထိုအခါ ဆရာတော်က ငါသည် တောင်တွင်းကြီးမြို့က ကြွလာခဲ့သည်၊ ငါသည် ဤရတနာပူရ အင်းဝနေပြည်တော်သို့ တစ်ခါတစ်ခေါက်မျှလည်း မရောက်ဖူးပါ၊ အသိမိတ်ဆွေ ဖြစ်သော ရဟန်းအပေါင်းအသင်းလည်း မည်သည့်ကျောင်းမှ နေသည်ဟု မသိရဘဲ ရှိသည်။ ဆွမ်းစားရန် အချိန်လည်း နီးကပ်လှပြီဖြစ်လို့ ဤအရပ်၌ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးစာ ဆွမ်းကို ဖိတ်ကြားရလျှင် ရနိုင်မည်လား၊ ဟု မေးသည်။
ဆရာတော် ရေးသားသော တောလားလင်္ကာကြီးများမှာ ၉-ပုဒ်မျှ ရှိပေသည်။ ထိုတွင် စက်ဆယ့်နှစ်လီ၊ ဒွါဒသီတွင်၊ သုံးလီဥတု၊ လက်ဝဲလုသား၊ အစချီ လင်္ကာ ၈-ပုဒ်မှာ ကပ္ပိလဝတ်ပြည်ကြွခန်း တောလားများ ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ပုဒ်မှာကား ဆရာတော်၏ ဆုပန်လင်္ကာ ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ဘုရားဆုကို ပန်တော်မူကြောင်း ဖော်ပြ၍ အရိမေတ္တေယျဘုရားရှင် လက်ထက်၌ ဗောဓိလောင်းလျာအဖြစ် ဗျာဒိတ်တော် ခတ်နှိပ်ခံရပါလိုကြောင်းကို ကိုးပုဒ်သျှင်ပင်၊ အံ့ချီးတင်သည်၊ ငါလျှင်လည်းကောင်း၊ ဗောဓိလောင်းဟု၊ ငြိမ့်ညောင်း တံဆိပ်၊ ရွှေဗျာဒိတ်ဖြင့်၊ ခတ်နှိပ်သေချာ၊ နှုတ်ဩဘာသည်၊ ၊ မြဲစွာဖြစ်လိမ့် လမှန်တည်း။ ဟူ၍ ဖွဲ့ဆိုပန်ယူထားလေသည်။
ရှင်ဥတ္တမကျော်၏ ဂုဏ်သတင်းကို အင်းဝဘုရင်ဒုတိယ မင်းခေါင် ကြားသိတော်မူလျှင် ရှင်မဟာသီလဝံသနှင့် ရှင်မဟာ ရဋ္ဌသာရတို့ကို ချီးမြောက်တော်မူသကဲ့သို့ တောင်တွင်းဆရာ တော်အား ချီးမြောက်တော်မူလိုသောကြောင့် ရွှေနန်းတော်သို့ ပင့်ဖိတ်ကာ အင်းဝနေပြည်တော်၌ပင် သီတင်းသုံးတော်မူပါမည့် အကြောင်း လျှောက်ထားတောင်းပန်သည်။ သို့ရာတွင် ဆရာ တော်သည် ငြင်းပယ်တော်မူ၍ တောင်တွင်းကြီးမြို့သို့ ပြန်ကြွ တော်မူကာ ငှက်ပစ်တောင်အနီး ရတနာ့ဗိမာန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးတော်မူသည်။
၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ပေလေးပင် ရှင်လေးပါးအပါအဝင် စာဆိုတော်ကြီး ရှင်ဥတ္တမကျော်၏ အရိုးအိုးဂူကို တောင်တွင်းကြီးမြို့ ၊ နတ်မှီတောရရှိ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၏ ကုန်းမြင့် တစ်နေရာ၌ တူးဖော်ရရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းဖော်ပြထားသည်။ ရှင်ဥတ္တမကျော်သည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၈၁၅ ခုနှစ် ၊ (ခရစ်နှစ် ၁၄၅၃) တွင် ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး သက်တော် ၉၇ နှစ် အရောက် (ခရစ်နှစ် ၁၅၅၀) တွင် ပျံလွန်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းအရ သိရှိရ၏။ ဆရာတော်၏ အရိုးအိုးဂူမှ နှစ်ပေါင်း ၄၀ဝ ကျော်ကြာပျောက်ဆုံးနေရာမှ နတ်မှီတောရတွင် အဆောက်အအုံ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန် ကုန်းမြေကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်း ဖြိုဖျက်စဉ် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ အရိုးအိုးဂူအတွင်း၌ အရိုးပြာအဖြူနှင့်အနက် နှစ်မျိုးကို အကန့်များနှင့် စနစ်တကျထားရှိသည်ဆို၏။
↑ လှသမိန် (၁၉၆၁ ခုနှစ်). ဂန္ထဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိပေါင်းချုပ်. ၃၅၇၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ဟံသာဝတီစာအုပ်တိုက်, ၅၊ ၆။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဥတ္တမကျော်၊_သျှင်&oldid=522011" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၄:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။